सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनले यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी बिखलन्दमा परेको छ । संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला सडक संघर्ष र चुनावको तयारीमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा कांग्रेस अड्किएको हो ।
गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संसद विघटनलाई गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्‍यो तर आन्दोलनमै गइहाल्न सभापति देउवाको मनले मानेको छैन ।
कांग्रेसले त्यसयता केही चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिसकेको छ । तर नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मिलेर संयुक्त मोर्चासहित आन्दोलनमा जान कांग्रेस अझै तयार भइसकेको छैन ।
संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै सडकमा ओर्लिएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा सडक संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेस र जसपासँग संयुक्त मोर्चा बनाउने कसरतमा देखिन्छ । त्यही कसरत अनुरूप बुधवार साँझ सभापति देउवालाई फकाउने प्रयास गरिएको थियो ।
बुधवार साँझ देउवाको निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर प्रचण्ड र नेपालले संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा अघि बढ्ने प्रस्ताव गरे । तर स्रोतका अनुसार देउवाले आन्दोलनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् ।
भेटमा सहभागी रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार देउवाले अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई कांग्रेसले आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने बताएका थिए ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई हामीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेका छौं,’ देउवाको भनाइ उदृत गर्दै लेखकले भने, ‘त्यो विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा हामीसँग फैसला कुर्नुको विकल्प छैन । बरू तपाईंहरूले पनि आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, हामी पनि आन्दोलनको मैदानमै छौं । छुट्टाछुट्टै गरौं, अहिले संयुक्त मोर्चा बनाउने कुरा नगर्नुस् ।’
देउवाको कुरा सुनेपछि प्रचण्ड र नेपाल दुवैले असहज महसूस गरे । कांग्रेसको साथ लिएर सडक संघर्षलाई तीव्र बनाउने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको प्रयास असफल भएको छ ।
करीब ४५ मिनेटसम्म चलेको छलफलमा प्रचण्ड र नेपाल दुवै अध्यक्षले संसद पुनःस्थापना भए पनि कांग्रेस नै निर्णायक हुने भएकाले पुनःस्थापनामै जोड दिन आग्रह गरेका थिए ।
देउवा किन एक्लै अघि बढ्ने मूडमा छन् त ? यस विषयमा हामीले केही देउवानिकट नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थियौं ।
देउवामा चुनाव जितिन्छ भन्ने ‘कन्फिडेन्स’
देउवाको नेतृत्वमा २०७४ सालको निर्वाचनमा होमिएको कांग्रेसले ठूलो पराजय भोगेको थियो । कांग्रेसमा आज पनि देउवाकै कारण निर्वाचन हारिएको भन्ने आवाज ठूलो छ । विशेष गरेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताले हारको दोषी देउवा रहेको बताउने गरेका छन् ।
निर्वाचनपछिका समीक्षा बैठकमा पौडेल पक्षले देउवालाई दोष लगाउने र देउवा पक्षले वाम गठबन्धनलाई दोष लगाउने सिलसिला चलिरहेको थियो ।
देउवानिकट नेताहरूको दाबीअनुसार आफूमाथि लागेको त्यो कलंकको टीका मेटाउने अवसर देउवामाथि छ । यतिबेला नेकपा फुटेको छ । सरकार अलोकप्रिय भएको छ । त्यतिबेला राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा भोट मागेको नेकपाका दुवै पक्षसँग जनतामाझ लैजाने कुनै एजेण्डा छैन ।
उसै पनि यसअघि भएको मध्यावधि निर्वाचनको परिणाम त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै पोल्टामा गएको नेपालको इतिहास छ । देउवाले यही हेरेर बसिरहेका छन् । चुनावमा एक्लै लड्ने र एक्लै बहुमत ल्याउने देउवाको प्रयास रहने छ ।
नेकपाको कुनै पक्षलाई सहयोग नगर्ने देउवाको अडान !
यतिबेला नेकपाको कुनै एउटा गुटसँग लागेर अर्काको विरुद्धमा जाँदा चुनावमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देउवाको निष्कर्ष छ । प्रचण्ड–नेपालसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा जाँदा सत्तामा रहेका केपी ओली बिच्किन सक्ने र चुनावमा आफूलाई बेफाइदा हुन सक्ने आकलन देउवाले गरेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपालसँगको भेटमा देउवाले २ वटा कुरा प्रस्ट पारेका छन् । पहिलो – संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ, यसका विरुद्धमा कांग्रेस आफ्नो हिसाबले आन्दोलन गर्छ र कसैसँग संयुक्त मोर्चा बनाउँदैन ।
दोस्रो – कांग्रेसले अदालतको फैसला कुर्छ । अदालतले संसद विघटनका पक्षमा फैसला गर्‍यो भने कांग्रेस तत्काल निर्वाचनमा होमिन्छ, यदि संसद सञ्चालन हुनुपर्ने फैसला गर्‍यो भने कांग्रेस संसदमा जान तयार हुन्छ ।
आफू यी २ विषयमा स्पष्ट भएको भन्दै थप दबाब नदिन प्रचण्ड र नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
देउवाको निष्कर्ष – कम्युनिस्ट फुटेकै छैनन्
देउवाले कुनै पनि बेला ओली र प्रचण्ड–नेपाल मिल्न सक्ने आकलन गरेका छन् । देउवाको यो बुझाइलाई तोड्ने प्रयास गर्दै बुधवारको भेटमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘ओलीसँग अब हामी कुनै हालतमा मिल्न सकिन्न । उनी संसद विघटनमा मात्र रोकिनेवाला छैनन्, चुनाव पनि गराउँदैनन् र थप प्रतिगमनका कदम चाल्छन् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’
जवाफमा देउवाले भनेका थिए, ‘हेर्नुस्, राजनीति सम्भावनाको खेल हो । त्यतिबेला स्थानीय चुनावमा हामीसँग तालमेल गरिरहनुभएको तपाईं फ्याट्टै ओलीसँग मिल्न कसरी जानुभएको थियो ? संसद पुनःस्थापना भए पनि तपाईंहरू मिल्ने ठाउँ छ, नभए पनि तपाईंहरू मिलेर चुनाव लड्ने ठाउँ छ । कांग्रेसले यो राम्रोसँग बुझेको छ ।’
अर्थात देउवा प्रचण्ड–नेपालप्रति त्यति साह्रो विश्वस्त छैनन् । उनीनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले सूर्य चिह्नका बारेमा फैसला गर्नेबित्तिकै नेकपाका दुवै समूहमा भारी मात्रामा अदलाबदली हुनेवाला छन् । चुनाव चिह्न जता छ, नेताहरू त्यतै जाने सम्भावना छ । पार्टी अहिले जुन हिसाबले फुट्यो भनिएको छ, निर्वाचन आयोग र अदालतको फैसलापछि त्यो त्यही हिसाबले जोडिन सक्छ । त्यसैले कांग्रेस नेकपा फुटिसकेको छ भन्ने भ्रममा छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भने, ‘कुनै पनि पार्टीले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हुन सक्दैन । कांग्रेसले पनि निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । संसद् विघटन गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्नेमा कांग्रेस विश्वस्त देखिन्छ । मुद्दा अदालतमा गइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’